2014-02-02 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
Ashampoo Movie Studio 1.0.13.1 Full With Regkey
IN Photo and Media Editor Tools - ON Saturday, February 08, 2014 No comments
Ashampoo Movie Studio 1.0.13.1 Multilingual | 169 MB
Ashampoo Movie Studio 1.0.13.1 ဟာ Movie တွေကိုဖြတ်ညှပ်ကတ် လုပ်တာ၊ Transition Effects ထည့်တာ၊ စာတန်းထိုးတာ၊ Background Music ထည့်တာ၊ Size လျှော့ချတာ၊မကြည့်ချင်တဲ့ကြေငြာတွေ
ကိုဖြတ်ထုတ်တာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်.Movie တွေကို ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ချင်သူများ အတွက် နံမည်ကြီး Ashampoo Movie Studio 1.0.13.1တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အသုံးပြုရတာလွယ်ကူသလိုဆိုဒ်အရွယ်အစား
IN Optimizer - ON Saturday, February 08, 2014 No comments
အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ..။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 27.8 MB ရှိပါတယ်..။
IN Design Tools - ON Friday, February 07, 2014 No comments
3D ၀ါသနာရှင်တွေအတွက်အရမ်းကောင်းတဲ့ sotware လေးပါ
့ မိမိတို့ လိုချင်တဲ့ စာလုံးတွေ Logo တွေကို 3D Design မျိုးစုံ ဖန်တီး ခြင်း
Design ကို အခြေခံနားလည်တတ်ကျွမ်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ Template တွေကိုပါ ရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်
blog ရေးတဲ့သူတွေအတွက်ပါအသုံးဝင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ
videoeditor သမားတွေအတွက်လည်း TEXT EFFCET
ဒဇိုင်းမျိုးစုံကိုဖန်တီနိုင်ပါတယ်အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးမှို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
full version ဖြစ်အောင် Crack နဲ့keygen လေးပါထည့်ထားပါတယ်
Himi 3D Animation Maker hi "ca" mawi tak le fiang tak ih tuah nak Tthaasi, mi then in, video edit nak thawn kawm in, an hmang theu mi tlaasi. Tthim nakah video kan edit tikah kan video edit mi ngaingaiathlen hlan ih ca ngan mawi takarak suak pungpo theu mi kha, himi 3D animation hman hiarak si, cu le ca ngan mawi nak vial menmen tlaasi lo.
A ca hi pakhat hnu pakhataher in si maw,atung in feh ti vek mawi tak in rem theih bet. A tlun ih zuk kan zoh dan ah cun, "ca" ngan mi mawi takih zuk ih suak ding cuabang nan,ataktak ah cun, "ca" ngan ih pakhat le pakhat herh kual rero ihamawi thei dandan ih remasi bik, cu le ca ngan kan rem tikah play san phahphah seh le,amawi dan ding kha hawl phahphah in, rem theh leamahatlun keh lam ah save nakaum.
Cunah save men, save theh in video edit nak hmrinhrim kha hmang leh seh la, cunah save mi kha phawrh in video edit nak Ttha thawn tuai dingasi,asave dan cuahar lo ih kan mah tenasave dan cu kan rak thiam mai dingazum um. na duh dingasi le,ahnuai ih download link mi ah hmet aw la, website pakhat ahava lut ding, kha mi iharak lang mi lakah download ti ngan nakah hmet aw la,adownload di
DOWNLOAD>>>>> Aurora 3D Animation Maker v12.05.09
DOWNLOAD>>>>> Crack + Keygen
Ashampoo Snap 7.0.4 Full With Crack
IN Screen Capture - ON Friday, February 07, 2014 No comments
Ashampoo Snap 7.0.4 Multilanguage | 36 MB
ကွန်ပျူတာ screen တစ်ခုမှာပေါ်နေသမျှ window အားလုံးကို နှစ်သက်ရာပုံစံ ဖြင့် Screen capture ဗွီဒီယိုရော ဓါတ်ပုံပါ ရိုက်နိုင်သော software တစ်ခုပါ။ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ function များက တော့ ဝဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာ တစ်ခုလုံးကို scroll ဆွဲ၍ ရိုက်နိုင်ခြင်း၊ main menu များ၊ hover menu များကိုပါ ရိုက်ကူးပေးနိုင်ခြင်း၊ အချိန်သတ်မှတ်ပေးထားပြီး ရိုက်ကူးနိုင်သော timer mode ပါဝင်ခြင်း၊ မိမိနှစ်သက်သကဲ့သို့ ရိုက်ကူးနိုင်သော free rectangle capture နှင့် free style capture များပါဝင် ခြင်း နှင့် Color picker လို့ခေါ်တဲ့ အရောင် ကုဒ်များကို မှတ်သားခါ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော
function နှင့် တစ်ကြိမ်တည်း ပုံများစွာရိုက်ကူးနိုင်သည့် Multishot on/off function
Yamicsoft Windows 8 Manager v2.0.3 full with keygen
IN Optimizer - ON Friday, February 07, 2014 No comments
Yamicsoft Windows 8 Manager v2.0.3 | 10.2 MB
02/05/2014: Windows 8 Manager v2.0.3 released!
IN Recovery Software - ON Friday, February 07, 2014 No comments
Active File Recovery Professional 12.0.5 | 26 MB
Mediachance Photo-Reactor 1.2.2 (x86/x64) Full With Keygen
IN Photo and Media Editor Tools - ON Friday, February 07, 2014 No comments
Mediachance Photo-Reactor 1.2.2 (x86/x64) | 48 MB
လေးပါ..။ အမှန်ဆို ကျွန်တော်လည်း မသုံးဖူးပေမယ့် မဆိုးတာနဲ့ အားလုံးအတွက်တင်ပေးလိုက်ရတာပါ။ စမ်းကြည့်ချင်ရင်တော့ အောက်မှာယူသွားလိုက်ကြပါဗျာ..။
Photo Collage Max 2.2.7.2 Full With Patch
Photo Collage Max 2.2.7.2 | 36 MB
Ocster 1-Click Backup 2.05 Full With Key
OS : Windows XP/2003/Vista//2008/7/8 (32/64 bit) Language : Multilingual
Nero Burning ROM 2014 15.0.04200 Full With Crack/Regkey
IN Burning - ON Friday, February 07, 2014 No comments
Nero Burning ROM 2014 15.0.04200 | 91.0 MB
Nero Burning ကို အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ....2014 15.0.04200 Update Version လေးမို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..လိုအပ်သူများအောက်မှာယူသွားလိုက်ပါဗျာ...
Ashampoo Burning Studio 14 v14.0.3 full with regkey
IN Burning - ON Wednesday, February 05, 2014 No comments
Ashampoo Burning Studio 14 v14.0.3 | 167.5 MB
Ashampoo ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို တော့အားလုံးရင်းနှီးနေကြမှာပါ။ အခုတခါလည်း
အရင် Version အဟောင်းကို ပြင်ဆင်မှုအတော်များများနဲ့ ပွဲထုတ်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ ပိုမိုသေသပ်တဲ့
အပြင်အဆင် နဲ့ အသုံးဝင် Tools တွေထပ်ပေါင်းထားတဲ့ နောက်ဆုံးထွက်လေးကိုဒေါင်း
Processor: Single-core 1 GHz processor / A double-core processor with at least 1,8 GHz is required to create video- and slideshow discs .
Hard Disk Space: 230 MB for installation/ Up to9GB for temporary files (DVD)/ 25/50 GB for temporary files (Blu-ray) / 100 GB for temporary files (Blu-ray XL)
Graphics Card:DirectX9compatible graphics card with Pixelshader v2.0 hardware support and at least 128 MB V-RAM.Min. screen resolution: 1280 x 1024
Home Page >> Here
Beautiful Bubble Live Wallpaper
IN Android - ON Wednesday, February 05, 2014 No comments
Android phone များအတွက် အလန်းစား
Beautiful Bubble Live Wallpaper လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
phone screen တွေကိုအရမ်းလှပစေတဲ့ apk လေးပါ
A fun bubble live wallpaper.
You can chooseadifferent bubble theme, color and number of bubbles floating.
-4color bubble
DOWNLOAD >>>>>LINK 1/ LINK 2
Android phone အတွက် IF Camera apk
IN Android - ON Tuesday, February 04, 2014 No comments
လာပြီဗျို့Android phoke တွက်GIF Camera apk
ဓါတ်ပုံကိုဖလန်းဖလန်းရိုက်သူတွေအတွက်ကာင်းတဲ့ apk လေးပါ
It’s really an amazing app during Christmas vacation.This free app can record the funny moments happening in Christmas,
It’s about the same as Cinemagram which is hot on iphone.
GIF Camera Features
You can share the created animated /with SMS, Facebook, Twitter, Sina Weibo.
Your feedback is very important to our work. We are determined to make the best GIF Camera on Android.
download>>>LINK 1/ LINK 2
home page http://linkabartechnology.blogspot.com/
IN နည်းလမ်းများ - ON Sunday, February 02, 2014 No comments
ဖုန်းများ အားကုန် အောင် သုံးခြင်း ကြောင့် ဖြစ်တက်သော ပြသနာ အမျိုးမျိုး နှင့် ဖြေရှင်း ခြင်း ဖုန်း တစ်လုံး က အနည်း ဆုံး ၃.၇ ဗို့ ရှိမှ ပါဝါ တက်ပါမယ် ။ ၃.၇ ဗို့ ထက်နည်း ပါ က ဖုန်း ပေါ် မူတည်ပြီး ပြသနာ အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပါတယ်
ဓာတ်ခဲ တွေက 3.7 ဗို့ မှ 4.2 ဗို့ ကြား ထဲ ရှိရပါမယ် ။ 3.7v ထက် လျော့ ပါ က အထက်ပါ error များကြုံ တွေ့ နိုင်ပါတယ် ။ ဘာကြောင့် 3.7ဗို့ အောက် လျော့ ကျ သလဲ ?? အကြောင်း အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ် ။ အဓိက အဖြစ် များတာ က တရုတ် ဓာတ်ခဲ တွေ ကြောင့် ပါ ။ ဓာတ်ခဲ သုံးတာ ကြာ ရင် လဲ ဖြစ်တက်ပါတယ် ။ ဖုန်း ic တစ်လုံးလုံး မကောင်း တော့ ရင် လဲ လိုတာ ထက် ပို ပြီး အန်ပီယာ ဆွဲ တဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လို ဖြေရှင်း မလဲ ??? ပုံ မှန် ဓာတ်ခဲ ထုတ် လို့ ရတဲ့ ဖုန်း တွေ က တော့ ဓာတ်ခဲ ထုတ်ပြီး ညှပ် ခွက် ( ဖားပါးစပ် ) နဲ့ အားသွင်း ကြည့် ပါ ။ 3.0 မှ 3.6 ဗို့ အတွင်း လက်ကျန် ရှိပါက ပြန်သွင်း လို့ အဆင်ပြေ နိုင်ပါတယ် ။ဒါ ပေမယ့် အားကုန်အောင် သုံး တိုင်း ပြန်ဖြစ်နေပါမယ် ။ 3.0V အောက် ရောက်ပါ က ဆိုင် မှာ ပဲ ပြုပြင် နိုင်ပါတော့ မယ် ။ အကောင်း ဆုံးကတော့ ဓာတ်ခဲ လဲ လိုက်ပါ ။ အထူးသဖြင့် ဓာတ်ခဲ အသေ ဖုန်း တွေ မှာ အတက်နိုင် ဆုံးသတိ ထား သုံး ကြပါ ။ ဥပမာ iphone ၊ Tablet စတာ တွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့ ဓာတ်ခဲ အသေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကိုယ် တိုင် လုပ် ဖို့ ခက်ခဲ တဲ့ အတွက် ဆိုင် သွား ရပါမယ် ။စက် ဖြုတ် ရတဲ့ အတွက် ၂၀၀၀ ၊ ၃၀၀၀ လောက် တော့ ပေးရမှာ ပါ ။iphone တွေ ကို တော့ Ipad အားသွင်း ခေါင်း နှင့် ကြိုး ကို အသုံး ပြုပြီး ပြန်လည် သွင်း နိုင်ပါတယ် ။ ကဲ သူငယ် ချင်း တို့ လဲ ဖုန်း ကို Battery Low ပေါ် ရင် ဖုန်းပြော ခြင်း ၊ သီချင်း နားထောင် ခြင်း ၊ Game ဆော့ ခြင်း များ မပြု လုပ် ခြင်း ဖြင့် ရှောင်ရှား နိုင်ပါတယ် ။အကောင်း ဆုံး က ဖုန်း 5% ရောက်ပြီ ဆိုရင် ပိတ်ထား လိုက်ပါ ။ သူငယ်ချင်း တို့ ရဲ့ မိတ်ဆွေ၊သူငယ်ချင်း တွေ သိအောင် ရှယ် ပေး လိုက်ပါ ဦး..။
IN Android Application - ON Sunday, February 02, 2014 No comments
DLL Suite 2013.0.0.2113 Full With Keygen
IN Utilities - ON Sunday, February 02, 2014 No comments
မိမိတို့စက်မှာ Virus ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ Patch, crack စတာတွေလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ Cleaner
Software တစ်ခုနဲ့ Settings အမှားမှတဆင့် အရေးကြီးတဲ့ DLL files တွေမှားဖျက်မိတဲ့အခါ system
တွေကမောက်ကမဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး BSOD (Blue screen of death) ဖြစ်တဲ့အထိ ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအ
နေနဲ့ ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါမျိုးပြဿနာမျိုးတွေက ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ဒီကောင်လေးသာဆောင်ထားပြီး
ပုံမှန် စစ်ဆေး ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုရင် မိမိတို့ စက်ဟာ DLL corrupted ဖြစ်ခြင်း ဒုက္ခမှကင်းဝေးစေနိုင်မှာ
OS : Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista, both 32-bit and 64-bit systems Language : Multilingual
Super Hide IP 3.3.8.6 Full With Patch
IN Internet Tools - ON Sunday, February 02, 20142comments
Super Hide IP 3.3.8.6 | 2.9 Mb
Full version ဖြစ်အောင် Patch ဖိုင်လေးထဲ့ပေးထားပါတယ် သူ့ကို Install လုပ်ပြီး Start bar မှ
Super Hiden icon ကို r-click - exit အရင်လုပ်ပါ ၊ပြီးမှDesktop ပေါ်မှ Super Hide ip Icon လေးကို
R-click - properties.. ကိုနိုပ်ပြီး downloadဖိုင်ထဲ့က Patch ဖိုင်ကူးထဲ့ပါ၊ Patch ဖိုင်ကို
D-click နဲ့ Run ပေးလိုက်ပါ။အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကဒေါင်းသွားလိုက်ပါဗျာ...........
Aurora 3D Animation Maker v12.05.09 + Crack + Keyg...
Yamicsoft Windows 8 Manager v2.0.3 full with keyge...
Active File Recovery Professional 12.0.5 Full With...
Mediachance Photo-Reactor 1.2.2 (x86/x64) Full Wit...
Nero Burning ROM 2014 15.0.04200 Full With Crack/R...
Ashampoo Burning Studio 14 v14.0.3 full with regke...
GOM Video Converter 1.1.0.60 Full With Patch